Panda Park "Riviera" - an adventure wonke umndeni
Inethiwekhi lokuqala intambo amapaki e Russia - panda amapaki. Rope amapaki ka calibers ehlukahlukene banda ngesibalo futhi nenombolo eqondwa. Kuyinto imikhaya emangalisayo indawo. Eminyakeni embalwa edlule kwaba emgwaqweni ukuzijabulisa kuphela kuye ngokuthi inkathi nesimo sezulu.
Futhi eMoscow babe kuqala panda epaki kanye emagcekeni ejele. Kulesi sigaba, kukhona ezimbili, enye yazo - Panda Park "Riviera" - itholakala okufanayo shopping centre.
Yini elindele izivakashi we park
Lapho uzothola ukuzijabulisa abantu babo bonke ubudala, kusukela izingane ukuba abadala, ngakho-ke, bathanda ukuza lapha imindeni yabo yonke.
Panda Park "Riviera" ezintathu-tiered. ukukhula Wezingane kusuka 110 cm kukhona imizila emibili ezingeni ukuphakama 1 imitha ukusuka phansi enhlabathini. Ezinganeni isidingo ukubukela ngokwabo, umuntu omdala kumele kube khona. Futhi izama, nabazali-izingqapheli ungakwazi ukubamba umoya wabo lapha. Ngqo elise izihlalo ukhululekile ngaphansi umzila ensikeni.
Amazinga abalandelayo at imitha ezine-ukuphakama futhi enzelwe izingane ezindala. Esekhulile ukuba 125 cm ingathunyelwa nemizila ephakeme, okuyizinto futhi ezimbili, kodwa ezingeni lokuqala kusenzima nice.
Uma ukukhula kwengane 135 cm, wayesebanga siyonikwa ngoba ezine umzila ngesikhathi ibambene 4 amamitha, kanye Wabasaqalayo usengakwazi ukuqeqesha phezu emazingeni aphansi.
Ngekukhula 140 cm kungaba kakade-umzila eziyisikhombisa ukwesabisa, nabanye isipiliyoni ukuzijabulisa okunjalo. izindlela ezimbili sokuyokhonza lezi amaklayenti. Futhi uma isipiliyoni akwanele, kungcono ukuhlala e-imizila imitha amane.
Awu, ngempela imidondoshiya of yimuphi ukukhula engu-150 cm ukunikela 4 eziphakeme mzila 7-9 amamitha lisemhlabathini. Scary? Khona-ke nihlale khona 4 amamitha.
Nguwena ngaso sonke isikhathi ukuze ivumelane yonke akuthandayo, izithakazelo kanye ubudala.
Uma ingane uyenqaba air travel, ukuze kube kuhle kumnandi Maze, okuyinto etholakala lapha, bese ekukhokhela.
Panda Park "Riviera" has futhi udonga ekhuphuka nge amathrekhi eziningana yinkimbinkimbi ezahlukene kanye-9 amamitha. Lezi ugibele ayatholakala ngemali ethile.
Izingubo nezicathulo ukuze emoyeni adventure kufanele kube ntofontofo. Nezingubo - mahhala, kodwa musa hang out, ungababaleli naphasi. Shoes - ukukhanya, ne-non-ukushelela amathe. Uma ngokungazelelwe usufikile lapha ngephutha, ngingabazi imishini kwesokudla, lapha uzonikwa amasokisi alahlwayo acoshe lokhu nezicathulo ezifanele. Bekanye amasokisi alahlwayo uthola isigqoko esifanayo, isigqoko sokuzivikela phezu kwalo.
Zonke imizila ziphephile, kucatjangwe ngako ngekucophelela. abasebenzi abanolwazi achithwa coaching, ukugqoka izinhlelo zokuphepha ukuze alawule kubo emalini, sibonise umzila, futhi uma kudingeka, ukuqondisa intuthuko, okusikisela ukuthi nokuthi uzosinikeza kanjani. Uma kudingeka, uyovuka, ukusiza wakwati kubeketelela bumatima.
Ungakwazi oda nokusekelwa ngabanye.
Lapho ungathola izithiyo engavamile eziningi abekho kwepaki intambo, olufana "Riviera" Panda Park. Izibuyekezo izingane kanye nabantu abadala ngomdlandla. многие приходят по нескольку раз. Abaningi ukuza lapha izikhathi eziningana.
Lapho ukuthenga amathikithi, ke kunenzuzo ukuthenga imali ikhadi club $ 100, inikeza ilungelo izaphulelo eningi.
Yalutho ukukhokhela imizila eziningana, kodwa ungabi abahahayo, ngenxa yokuthi akubona bonke bazokwazi balukhulume engaphezu kwemibili.
Izingane imizila angenamkhawulo, okungukuthi, kungathatha iyiphi inombolo izikhathi, kodwa lonke aphethwe ithikithi ikhokhwe kanye kuphela.
Emnyango isandla yesivakashi lufakwa isongo nge imininingwane mayelana nohlelo olusebenzisayo ikhokhwe. Ukuhamba umzila, kumele isetshenziswa kudivayisi yokufunda.
Abazali abenza ungadluli umzila ngokwayo, kodwa ahambe izingane kufakwe Panda Park "Riviera" mahhala kuphela. Futhi wagqoka isongo ulwazi olufanele.
Ensimini ka intambo edolobheni kukhona cafe elincane lapho ungakwazi phumula futhi abe isidlo, bese ubuka ukuthi kwenzekani nemizila.
Kukhona amakamelo amaningana ukugubha usuku lokuzalwa, amasevisi nokuveza ahlinzekwa.
Panda Park "Riviera" itholakala ikamelo avaliwe futhi usebenza unyaka wonke, noma isimo sezulu, kuka abakwazi ukuqhosha izikhungo efanayo elise endaweni evulekile amapaki.
Underground Station, ukunikela nokufinyelela okulula Panda Park "Riviera" - "Avtozavodskaya" futhi "Tula". Ukuze ezitolo emuva njalo ngemva kwemizuzu engu-15 bangama-shuttles khulula. Kubathandi ukuhamba akunzima ukuhamba.
Saint UZandile Cathedral Kiev - ifa Ukraine zamasiko
Suvarnabhumi (Airport): scheme, indawo, indlela ukuze uthole
Kuphi ngo-Ephreli ukuba uphumule
MSU: "University" metro station. Noma ingabe "Sparrow Hills"?
I leziqhingi of Tristan da Cunha: indawo, incazelo
Car tappet: isimiso wokusebenza futhi idivayisi
Ahambisana igama elithi "ihlathi" uyoletha izimangaliso eziningi
Fencer Olga Harlan: umsebenzi, impumelelo, empilweni yakho
Isipho kumuntu iminyaka engama-35. Imibono yezipho
Indlela ukunquma uma isiphawulo. Nquma ukuphela amacala
U-Alexander Pankratov-Black: ifilimu
COTA tinctoria: incazelo, izici kanye ayelapha zezitshalo
Indlela Fry izinhlanzi breaded: iresiphi ngesithombe